Thermomix को साथ Tuna प्याट्टी नुस्खा ThermoRecines
एपेटाइजरहरू115 मिनेट6-8 व्यक्ति
टुना इम्पानाडा कुनै पनि उत्सवमा मिस गर्न मिल्दैन। हामी सँगै हुँदा यो आदर्श हो जन्मदिन, सन्तहरू, वा पारिवारिक पुनर्मिलनको कुनै पनि साँझ मनाउनुहोस्।
मैले गरेको अन्तिम कुरा, यदि मलाई सहि सम्झना छ भने, राजाहरूको पूर्व संध्या थियो। त्यो बिहान मेरा बाबुआमा आफ्ना नातिनातिनाहरुलाई बुद्धिमती पुरुषहरुलाई पत्र पठाउन सधैँ लैजानुहुन्छ। त्यसैले म तयारी गर्न अवसर लिन्छु रोस्कोन्स, थ्री किंग्स डे र मा खाना खाजा खाजा तिनीहरूको Majesties को घुमाउरो पछि Magi। यो यति धेरै उपहारको साथ म भान्सामा पनि देखाउँदिन।
परेडमा मेरा साना बच्चाहरूको अनुहार हेर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। त्यस पलमा बच्चाहरूको आँखा कसरी उज्यालो भयो भनेर हेर्नु भन्दा सुन्दर अरू केही छैन। मेरा छोरीहरू उनीसँग हरेक बर्ष उनको चार हजुरबा हजुरआमा, मेरो बहिनी, उनको प्रेमी र हामी, उसका आमाबुबासँग भेट्न जान धेरै भाग्यशाली छन्। तर अन्तमा यस्तो लाग्छ कि दिउँसो केहि अलि लme्गडो छ के गर्ने थाहा छैन, त्यसकारण हामी प्रायः घरमा भेला हुन्छौं र यो मेरो एउटा व्यंजन हो। बेलुकाको खाना
मलाई टुना इम्मानाडा तयार गर्न मन पर्छ, म प्रायः आटा र स्टफिंग बनाउँदछु तर यदि म केही समयमै समात्छु भने म किन्छु। पफ पेस्ट्री बनायो। धेरै अवसरहरूमा तपाईंले हामीलाई फेसबुक समूहमा टिप्पणी गर्नुभयो कि "Lidl" puff पेस्ट्री आटा धेरै धनी थियो र मैले तपाईंलाई भनेको छु कि एक पटक चाखेर मैले यसको गुणवत्ताको लागि सिफारिश गर्दछु किनभने यो धेरै राम्रो छ।
म यसलाई काली मिरी, प्याज, टुनाको क्यान र उमालेको अण्डा। जे होस् मैले केहि व्यंजनहरु देखेको छु र मलाई लाग्छ म आफैंलाई तयार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछु नयाँ भर्ने। म बीचमा अनिश्चित छु सब्जिहरु र त्यो अक्टोपस र टुना, तिनीहरू दुबै राम्रा देखिन्छन् र निश्चित छन् स्वादिष्ट।
नुस्खामा जानु अघि म यो दिन चाहन्छु मेरो साथी र साथी डायना धन्यवाद जुन उनको जन्मदिन मा उसले हामीलाई यो नुस्खाको साथ मनोरन्जन गर्‍यो र मलाई यो मनपर्‍यो।
1 टुना पाई
जन्मदिन र अनौपचारिक जमघटहरूको लागि उत्तम विधि।
50 सेतो वाइन को छ g
लर्ड वा बटरको g ० ग्राम
G० ग्राम ताजा बेकरको खमीर वा डिहाइड्रेटेड बेकरको खमीरको १ पाउच
रंग गर्न १ अण्डा
100 कुचल टमाटर (प्राकृतिक वा क्यान्ड)
चिनीको १ चम्मच
२०० अचारको अचार बोनिटो वा जैतूनको तेलमा (स्वाद अनुसार)
१ सानो पिट पिट कालो जैतुनहरूको
हामी पानी, तेल, रक्सी र मक्खन गिलासमा खन्याउँछौं। हामी प्रोग्राम १ मिनेट, ººº, गति २।
हामी अण्डाहरू र ताजा खमीर थप्छौं। हामी मिक्स गर्दछौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5।
यदि हामी पाउच डिहाईड्रेटेड खमीर प्रयोग गर्छौं भने यो पीठो संगै जोड्नु पर्छ।
हामी पीठो र नुन थप्छौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 15 र तुरुन्तै पछि, हामी प्रोग्राम गर्दछौं २ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति।
यसको भाँडो दोब्बर नभएसम्म, करीव with० मिनेटको लागि बेकरमा गिलास भित्र आटा आराम गरौं। म सामान्यतया समय २ देखि hours घण्टा सम्म बढाउँछु ताकि आटा बढी पाचन होस् र राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सकून्।
हामीले गिलास, प्याज, रातो र हरियो मिर्च, टमाटर, तेल र चिनी र नुन राख्यौं। हामी प्रोग्रामिंग द्वारा काट्छौं Seconds सेकेन्डको गति।। स्प्याटुलाको साथ हामी ब्लेडहरू र प्रोग्राममा भित्ताहरूको बाँकी अंशहरू कम गर्दछौं २० मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १ १/२।
कन्टेनरमा हटाउनुहोस् र चुराइएको र निचराएको बोनटो थप गर्नुहोस्।
रोलिंग पिनको सहयोगमा, हामी आधा आटा दुई प्लास्टिकको बीचमा फैलाउँदछौं र यसलाई बेकिंग कागजमा लाइन गरिएको बेकिंग ट्रेमा राख्छौं।
हामी पूरै सतहमा भर्न फैलाउँछौं र काटिएको कडा उमालेको अण्डा माथि राख्छौं र, यदि हामी चाहन्छौं भने कालो जैतुनहरू।
हामीले रोलरको साथ अर्को आधा प्रसार गर्‍यौं र भर्न कभर गर्दछौं। हामीले किनारहरू काट्यौं र मोहर लगायौं। म प्राय: तिनीहरूलाई पिज्जा कटरको साथ काट्छु र काँटाको टाइन्सको साथ ती कसले बन्द गर्दछ।
आटा कटौती संग हामी सतह सजावट। फोर्कको साथ आटा बनाउनुहोस् ताकि स्टीम बाहिर आउँदछ र पिटेको अण्डाले ब्रश गर्दछ।
हामीले ओभनमा राख्यौं र करीव minutes० मिनेटमा हामीसँग हाम्रो ग्यालिसियन ईम्पानेडा छ।
थप जानकारी - तरकारी पाई / सम्पूर्ण अक्टोपस र टुना इम्पानेडा
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, ल्याक्टोज असहिष्णु, १ घण्टा र १/२ भन्दा बढी, आटा र रोटी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » टुना पाई
उहम्म यो कस्तो देखिन्छ, म यसलाई गर्न कोशिस गर्दैछु! तपाइँ कुन खमीरलाई तपाइँ ताजा वा डिहाइड्रेटेडको सिफारिश गर्नुहुन्छ? धन्यवाद!
म यसलाई सामान्य रूपमा ताजा खमीरको साथ तयार गर्दछु, तर यदि तपाईंले खमीरलाई डिहाइरेट गर्नुभएको छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, यो पनि राम्रोसँग काम गर्दछ।
नमस्कार! कस्तो राम्रो देखिन्छ र म एक बनाउनको लागि कत्ति उत्साहित छु! म आधा सामग्रीको साथ एउटा बनाउन चाहान्छु, यो अझै पनि मूर्खतापूर्ण छ मँ सोध्छु, तर के गति, तापमान र समय समान हुनेछ? पिठो आटा जस्ता आटा स्थिर गर्न सकिन्छ?
BEGO लाई जवाफ दिनुहोस्
एम्मान्डसलाई लामो समयसम्म बाँच्नुहोस्! यो मलाई मन पर्छ। म तपाइँलाई केहि विचार छोड्दछु:
- sooo धेरै प्याज र रातो मिर्च संग कुखुरा।
- नाशपाती र प्याज रगत सॉसेज
- कोड र प्याज को एक धेरै
झींगा र गुलाहरू
र हो, यो सत्य हो, Lidl puff pastry साँच्चिकै राम्रो छ, मैले मात्र समस्या पाउँछु कि यो वर्ग हो र जब मैले यसलाई किन्दा यसको गोलाकार मोल्ड थियो ... तर मैले किनारहरूमा थोरै निश्चित गर्नुपर्‍यो, तर हे, Quiche अद्भुत थियो।
कस्तो राम्रो सुझाव इरेन, म तिनीहरूलाई अलि अलि प्रयास गर्नेछु र म तपाईंलाई भन्नेछु।
तिनीहरू स्वादिष्ट बाहिर आउँछ !!!!! कहिलेकाँही मैले यसलाई मिठो ह्याम र चीजले बनाउँदछु र यो पनि धेरै स्वादिष्ट हुन्छ!
म पक्का छु मेरा छोरीहरूले यो मन पराए !! धन्यवाद।
हे मेरो गेश, म एम्पानेडास मन पराउँछु।
कोड र piquillo काली मिर्च (मेरो साथी ग्लोरिया बाट नुस्खा) भरिएको, तिनीहरू पनि विलासी छन्।
डेल्फी धन्यवाद। भरणको लागि कस्तो राम्रो संयोजन। मैले प्रयास गर्नु पर्छ।
उफ्! अर्को प्रश्न: यदि हामी ताजा बोनिटो थप्छौं, के यो सोफ्रिटोको रूपमा एकै समयमा थपिएको छ? म ह्यामले भरिएको च्याउको बारेमा सोच्न सक्छु ...
कस्तो राम्रो देखिन्छ! अर्को अधीनता:
यर्क ह्याम, बेकन र आधा भागहरूमा मिति।
म यो मेरो आमाको लागि गर्नेछु, उनी मितिहरूमा चासो राख्छिन्।
अंडा सहित जिजास को, राम्रो मिश्रित ... म भोको छु !!!
स्वादिष्ट !! तपाईंको सबै सुझावहरूको साथ यसले मलाई भोक पनि बनाउँदछ।
Mmmmm !!! त्यो राम्रो देखिन्छ। मलाई इम्मानाडास मन पर्छ र जब म घरमा पार्टी वा लन्च हुन्छ म एउटा तयारी गर्छु। सब भन्दा सफल भनेको त्यो हो: चीज प्रकारको ट्राँकीसका स्लाइसहरू, पासा बेकन (ऑस्कर मेयर उत्तम), हेम र मितिहरूको स्लाइसहरू। यसको कुनै बेकार छैन।
नयाँ वर्षको साँझ मैले क्रिसमसबाट पाएको बाँकीको फाइदा उठाउँदै, मैले निम्न इम्पानेडा (निश्चित रूपमा लिडलको पीठोको साथ) बनाए र पूरै परिवार छक्क परे।
यसमा बाँकी कारमेलित प्याज थियो र मैले यसलाई आधारको रूपमा प्रयोग गर्‍यो।
मसँग फ्रिजरमा रोकिफोर्ट आइसक्रीम थियो जुन मैले सलादको लागि तयार पारेको थिएँ, मैले यसलाई तयार पार्नु अघि केहि बेर लिएँ र प्याजको माथि राखें।
त्यसपछि मैले हेमका स्लाइसहरू थपें ​​र अन्तमा ममा काटिएको मशरूमको आधा प्याकेज थियो, मैले तिनीहरूलाई प्यानमा अलि बनाएँ र तिनीहरूलाई अन्तिममा राखें। यो वास्तवमै अति उत्तम थियो।
ओस, के सुझाव तपाईले हामीलाई भर्खरै दिनुभयो। कस्तो राम्रो कुक, लगभग सोचे बिना र महत्त्वपूर्ण कुराको फाइदा उठाउँदै, तपाईंले एक आदर्श स्टार्टर बनाउनुभयो !!
केवल चीज आइसक्रीम पग्लिन र यसले पफ पेस्ट्रीलाई गीला गर्यो?
नमस्ते, यो पग्लिएन। मैले पुस्तकबाट आइसक्रिम रेसिपी पाएँ "हाम्रो होस्टेसको रेसिपीहरू" सलादको लागि बनाइएको छ। मैले यसलाई बाहिर निकालें र ब्याटरमा राखें जब यो कोठाको तापक्रममा थियो। यो फैलिएको जस्तो भयो। र ओभनमा राम्रोसँग आटा भिजाउनु भएन। फेरि पनि शुभकामना र धन्यवाद। मलाई यो वेबसाइट मन पर्छ।
धन्यवाद रोकाओ, म यसलाई प्रयास गर्छु।
सिल्भिया एकदम राम्रो देखिन्छ, अहिले म खानाको लागि मेरो तयारीको लागि सास तयार गर्दैछु, तर राम्रोको सट्टा, म मेरो खानाबाट छोडेको कुखुराको मासु राख्छु, र तपाई जस्तै उमालेको अण्डा, हेरौं, कसरी काम गर्दछ, म तपाईंलाई यसको बारेमा भन्नेछु।
तपाइँ पक्कै पनि यो कुखुरा संग प्रेम गर्नुहुनेछ, यो धेरै राम्रो संयोजन हो।
एक ट्रिक: म पहिले भर्न तयार गर्छु किनकि यो पाई भेला गर्न चिसो हुनुपर्दछ र यसरी फ्रिजको माध्यमबाट नजाई राम्रो चिसो हुन्छ, जुन उत्तम छ। त्यसपछि म गिलास वा केही नधोई पीठो बनाउँछु, यो अलि रातो रहन्छ तर स्वादमा धेरै धनी हुन्छ।
आश्चर्यलाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो विचार, त्यसैले आटा भरने को स्पर्श छ। धेरै धेरै धन्यबाद, हामी यसलाई परीक्षण गर्नेछौं।
नमस्ते साथीहरु, मैले एउटा कोसिस गरें जुन राम्रो थियो र तरबूज एकदमै राम्रो थियो, मीठो र नुनको भिन्नताले यसलाई धेरै राम्रो स्वाद प्रदान गर्दछ। कालो हलवाले एक्लै भरिएको, यो पनि धेरै राम्रो छ। अभिवादन।
हे भगवान, किनकि तपाईले यति भन्नु हुन्छ तर मैले त्यस्तो कुनै संयोजनको कल्पना पनि गरिन। तर यसको विपरितले यसलाई राम्रो स्पर्श दिन्छ। धन्यवाद!!
एक श doubt्का कि म पागल भएको छु डिहाइड्रेटेड बेकरी खमीर र noooooo laaaaa खोज्न म यसलाई रासायनिक खमीर जस्तै फेला पार्छु? मैले ताजा सजिलो पाएँ तर अर्को छैन
यो रसायन विज्ञान जस्तै छैन। यो खामहरूमा पनि आउँछ र म यसलाई कन्स्टार्च ब्रान्डबाट किन्छु। तिनीहरूसँग यो क्यारेफोर, हिप्पर, अल्काम्पो ...
इम्मानाडा स्वादिलो ​​हुन्, म आमालाई सिफारिस गर्छु जुन मेरी आमाले बनाउँछिन्, जब यो पकाइन्छ, उनी सबै चीजहरू टुक्रा पार्छिन् र उनको सुपर इम्पानेडा बनाउँछिन्, जुन पनि धेरै स्वादिष्ट हुन्छ जोर्जा हो, धन्यबाद केटीहरू, अभिवादन
जोर्जा? के तपाई मलाई भन्न सक्नु हुन्छ? धेरै धेरै धन्यबाद!
म मेरो छिमेकी पिलारको सिफारिस गर्दछु। लहसुन-मरीन्टेड कम्मू फिललेटहरू, काटिएको चीज र एप्पल। मूल र स्वादिष्ट। थप रूपमा, यो अझ चिसो छ र बच्चाहरूले यसलाई मन पराउँछन्। व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, आउनुहोस् हामी हिम्मत गर्दछौं र खानाको लागि केहि गर्छौं, जुन हामी घरमा राख्न चाहन्छौं: P। कडा अभिवादन।
Bluencar लाई जवाफ दिनुहोस्
डायोजस् के पेन्टहरू आज दिउँसो म यो कुरामा कुनै श .्का बिना गर्दछु। मैले फिलाडेल्फिया, मितिहरू र बेकनको साथ प्रयास गरेको छु र यो पनि मरेको छ।
म तिनीहरूलाई फिलाडेल्फिया चीज र काटिएको तातो कुकुरको प्याकेटको साथ बनाउँछु। म तिनीहरूमा चीज थप्छु, यो सबै आटामा फैलियो र शीर्षमा मिति राख्छ। प्रत्येक पटक जब म यो गर्छु, म यो धेरै मन पराउँछु। म आशा गर्दछु तपाईंलाई पनि यो मनपर्दछ। धन्यबाद
धन्यवाद रोजा, अर्को सुझाव जुन मैले प्रयास गर्नुपर्दछ। शुभकामना
हेलो फेरी केटीहरू। पाई ... उत्कृष्ट म यसलाई समय-समयमा रगत सॉसेज, पिप्पिन स्याउ र पाइन नट्सले भरिन्छ। यो गर्न धेरै सजिलो छ र यो स्वादिष्ट छ।
कस्तो राम्रो संयोजन, म सबै तीन घटक मन पर्छ। म यो प्रमाणित गर्छु। शुभकामना
तपाईको सबै व्यंजनहरुका लागि धन्यबाद, तपाई मेरो लागि धेरै खाजा र बेलुकाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ र इम्पानेडाको यो विचार यस हप्ता मेरी जेठी छोरीको जन्मदिनको लागि उत्कृष्ट छ।
मसँग एउटा प्रश्न छ, नयाँ मोडलको बाँया पट्टि मोडको प्रयोग के हो, धेरै व्यंजनहरू खुशी पाले बनाइन्छन् र मसँग हिम्मत छैन कि मोडल २१ मा राम्रोसँग बाहिर नजान्दा तिनीहरूसँग गर्नुहोस्, के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? अन्यथा मलाई लाग्दछ कि ती दुई मोडेलहरू एकै हुन्, सही?
सबै कुराको लागि पुन: धन्यबाद।
Beatriz त्यहाँ मोडेल TM-21 र TM-31 बीच केही भिन्नताहरू छन्। जब हामीले TM-21 मा "बायाँ मोड, स्पून स्पीड" भन्यौं, तपाईंले पुतलीलाई ब्लेडमा राख्नुपर्छ र तपाईंको सबैभन्दा कम गति सेट गर्नुपर्छ, जुन मलाई लाग्छ 1 हो। TM-21 पहिले तातो हुन्छ, त्यसैले यदि रेसिपी I मा तापमान 100º भन्नुहोस्, तपाइँ 90º राख्नुहुनेछ र हामी गति5मा क्रस गर्छौं, TM-21 मा यो31/2 गतिमा कुचिएको छ।
म आशा गर्छु कि मैले तपाईंलाई केहि सहयोग गरेको छु। शुभकामना
धेरै धेरै सिल्विया धन्यबाद, मलाई व्यंजनहरु को विषय पहिले नै स्पष्ट छ त्यसैले म उफ्रन सक्छु र तपाईलाई केहि तयार पार्दैछु।
सँधै तपाईले मेरो शंकाहरू समाधान गर्नुभयो।
इम्पानेडा प्रभावशाली! मैले यसलाई आज खानको लागि बनाएको छु र त्यहाँ एउटा सानो टुक्राबाट बाँचेको छैन ... धेरै स्वादिष्ट, साँच्चै !!!! पनीर र बधाईको लागि ब्लगमा धन्यवाद !!!
सोनिया मलाई खुशी लाग्यो तपाईलाई यो मन पर्यो। मेरो परिवारमा हामी सबैलाई यो मनपर्दछ र मैले यसलाई सधैं कुनै पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि बनाउनुपर्दछ।
मैले अर्को दिन यो गरें, र यो वास्तवमै राम्रो थियो ... तर
आटा रोटीको आटा जतिकै रह्यो, पफ पेस्ट्री पाना जस्तै थिएन
एक पटक थर्मोमिक्सले रेसिपी बनायो र यसलाई आराम गर्न दिन्छ, मैले यसलाई hours घण्टाको लागि छोडिदिएँ। के मैले पिठोलाई निश्चित तरिकाले घुमाउनु पर्छ कि यसले शिटको त्यो बनावटलाई लिन्छ? तपाईं कसरी पफ पेस्ट्री बनाउनु हुन्छ? ...
क्रिस्टिना, तपाईं सहि हुनुहुन्छ, आटा रोटीको प्रकारको बढी हुन्छ। यदि मैले अर्को पफ पेस्ट्री फेला पारे भने म यो तपाईंलाई पठाउँछु। सत्य यो हो कि अन्तिम पटक मैले lidl बाट पफ पेस्ट्रीसँग गरेको छु। यो महान बाहिर आउँछ।
सिल्भिया, म पनि पफ पेस्ट्रीको साथ प्रयास गर्न चाहान्छु। यदि तपाईंले यो पाउनुभयो भने, तपाईं हामीलाई भन्नुहुनेछ। जे भए पनि यो स्वादिष्ट भयो
म हेर्दै रहन्छु र यदि मैले केहि भेट्टाए भने म तपाईंलाई भन्नेछु। शुभकामना
यो राम्रो लाग्दछु म यो र यो केटोको लागी नया हुँ
नमस्कार, म सोध्न चाहन्छु कि पफ पेस्ट्री स्थिर छ वा ताजा छ? र त्यसपछि म यो जान्न चाहान्छु कि यो कसरी भेला हुन्छ, यदि यसलाई तह लगाईन्छ वा माथि कभर गर्नको लागि काट्छ भने? जे भए पनि, नौसिखिया प्रश्नहरू, धेरै धेरै धन्यवाद।
राम्रो, मैले हिजो यो बनाएको थिएँ
म खुशी छु तिमीलाई फिना मन पर्छ। घरमा म सधैं पारिवारिक जमघटहरूमा यसको तयारी गर्दछु।
एम। कारमेन भन्यो
इम्मानाडाको पिन्ट के हो, मैले यसलाई केहि अवसरमा बनाएको थिएँ तर यो कसरी भयो भन्नेसँग केही गर्न बाँकी छैन, आज दिउँसो हामी यो देख्छौं कि यो कति सफल छ। तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, तिनीहरू महान छन्
एम। कारमेनलाई जवाफ दिनुहोस्
म पृष्ठमा हेर्दै छु र आश्चर्यजनक छ कि म थर्मोमिक्समा नयाँ छु र तपाईंले मलाई धेरै मद्दत गर्नुभएको छ, म यसलाई धन्यवाद निरन्तरता दिनेछु।
योलानलाई जवाफ दिनुहोस्
आज राम्रो छ मसँग यो रातको खानाको लागि हो, रातातौइले जुन मैले हिजोदेखि टुना र उमालेको अण्डको केही क्यान छोडेको थिएँ।
यो दोस्रो पटक हो जुन मैले १ हप्ता भन्दा पनि कम समयमा गरेको छु !! LOL यो स्वादिष्ट छ ... यसको बिन्दुमा, यो सुख्खा छैन र Lidl आटा म यो प्रमाणित गर्छु कि यो धेरै राम्रो छ !!
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद!
योलीलाई जवाफ दिनुहोस्
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद छ र मलाई खुशी छ कि तपाईले इम्पानेडासँग यस्तै सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो। शुभकामना
नमस्ते सिल्विया! हिजो मैले एम्पानेडा बनाए र यो मलाई राम्रो लाग्न सक्छ कि यदि तपाईसँग हेम र चीजसँग बनाउने यो नुस्खा छ भने, मैले बनाएको थोरै ब्ल्यान्ड हो। धन्यवाद। मलाई तपाईंको ब्लग मनपर्दछ, यसले मलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
कान्ची, मसँग यो नुस्खा छैन तर यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि यसले यो पीठो कसरी चलाउँछ र हामीलाई बताउनुहोस्। शुभकामना
सिल्भिया म पीठो बनाउँदिन, म लिन्डबाट एउटा किन्छु जुन धेरै राम्रो छ र म समय बचत गर्छु, भर्ने भनेको सानो छ जुन मैले मात्र हेम र चीज राखें।
नमस्ते सिल्विया! मैले अर्को दिन एम्पानेडा बनाएँ र यो एकदम राम्रो छ, मलाई यो अधिक सोफ्रिटिलोको साथ मनपर्दछ, के म एकै समयमा केही थप प्याज र खुर्सानी थप्न सक्छु वा म यसलाई थप्न पनि सक्छु? धन्यवाद!
नमस्ते केटीहरू, के तिमी डु the्गामा आउने सोफ्रिडोसँग राम्रो हुन सक्छौ? मसँग मेरी छोरीको म birthday्गलबार जन्मदिन छ, म एउटा इम्पानेडा बनाउन चाहन्छु, र यो राम्रो भयो (किनकि मलाई केहि महत्वपूर्ण आमाहरू छन्)। धन्यवाद।
मलाई लाग्छ कि यो सोफ्रिटोको साथ धेरै स्वादिष्ट हुन सक्छ, तर मैले यो कहिले गरेको छैन। मैले गरेको नुस्खामा भनेको रूपमा यो गर्नुहोस् कि मैले यो बीस भन्दा बढी पटक गरिसकेको छु र यो अभूतपूर्व आउँछ, तिनीहरूलाई पक्कै पनि यो मनपर्दछ।
तपाईको सानोलाई अभिवादन र बधाई छ।
पिलर पेरेज भन्यो
यदि म हतारमा छु भने, म चीजहरू जटिल बनाउँदिन: भाँचिएको पीठोको साथ। म यो खरीद गर्छु, पहिले नै बनाइएको, मर्क्डोना मा। यो धेरै crunchy छ। यदि मैले यो भरियो भने: क्यान्ड टूना, उमालेको अण्डा, टमाटर, भुटेको काली मिर्च, टिमिमा भरी चुचुरो हुन्छ।
Pilar perez लाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो छ कि यदि त्यहाँ भीड छ भने यो एक राम्रो फिक्स हो। शुभकामना
नमस्ते केटीहरू !!!! मेरी आमा यो पाई बनाउन चाहानुहुन्थ्यो जुन एकदम राम्रो देखिन्थ्यो ... र हामी जान्न चाहन्थ्यौं कि लिडल पफ पेस्ट्री ताजा छ वा स्थिर छ? र कति वा अरुको लागि यो कम वा कम छ? धेरै धेरै धन्यवाद ... हामी तपाईको ब्लगमा व्यसनमा छौं, बधाई छ!
मार्था, पफ पेस्ट्री ताजा छ, यो फ्रिज क्षेत्र मा सॉसेज पनी छेउ, चीजहरू मा छ। सावधान रहनुहोस् कि शॉर्टकट पेस्ट्री र पफ पेस्ट्री सँगै छन्, हराउनु हुँदैन। इम्पानाडा निकै ठूलो बाहिर आउँदछ, यसलाई सानो टुक्रामा काटेर, लगभग २ more अधिक वा कमको लागि।
नमस्कार केटीहरू, सबै व्यंजनहरूका लागि धन्यवाद, सत्य यो हो कि तिनीहरू सबै धेरै राम्रो देखिन्छन्। इम्पानेडाको सन्दर्भमा म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु कि यो पीठोसँग मिठो बनाउन सकिन्छ कि पफ पेस्ट्री छैन किनकि हामीलाई कुनै पनि मनपर्दैन। तिनीहरूलाई र पनि तपाईंलाई पीठो पिठोको बारेमा सोध्छु, मलाई यो के हो थाहा छैन, मेरो अज्ञानतालाई क्षमा गर्नुहोस् तर म अझै धेरै सिक्न बाँकी छु।
Aranxa, यदि तपाईं पफ पेस्ट्री मन पराउनुहुन्न, भरिने भाग बनाउनुहोस् र तपाईंलाई मनपर्दो आटा राख्नुहोस्। ताकतको पीठो आटाको लागि विशेष हो र जबसम्म रेसिपीले माग्छ तपाईं यसलाई अर्कोको लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। यसले पीठोलाई बढ्न मद्दत गर्दछ र यो अन्य पिठो भन्दा फ्लफियर बाहिर आउँछ। तिनीहरूले यसलाई मर्दाडोना, क्यारफोर, अल्काम्पो, हिपकरमा बेच्छन् ...
नमस्ते केटीहरू: मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, आज तिनीहरूले मलाई मकैको पिठो बनाए, मकैले बनेको, मिलमा, र म यसलाई इम्पानेडा बनाउन चाहन्छु, तर मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, किनकि मलाई लाग्छ तपाईंसँग छ यसलाई गहुँको पीठोसँग मिसाउन, र मलाईँ थाहा छैन यो कसरी गर्ने
यो, अन्य आटा सामान्यतया राम्रो राम्रो बाहिर आउँछ, तर यो पीठ संग म छैन
थाहा छैन कसरी गर्ने, मँ चाहन्छु कि तपाई मलाई एक हात दिनुहोस्, अग्रिम धेरै धेरै धन्यबाद। चुम्बनहरु ……………।
MARISA लाई जवाफ दिनुहोस्
मारिसा, तपाईं मलाई यो प्रश्नको साथ समात्नुहुन्छ। सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन तपाईं यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कहिले पनि मिश्रिक तवरले मिसिएको छैन। यो प्रश्न हाम्रो फेसबुक समूहमा राख्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि अधिक व्यक्तिहरू यसलाई पढ्छन् र सँगै तिनीहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छन्। माफ गर्नुहोस्। एक सानो चुम्बन
सबै विचार र सुझाव गजबका छन्। मैले तिनीहरूलाई सबै लेख्नु पर्छ र प्रयास गर्नु पर्छ। म केवल भन्न जाँदै थिएँ कि सिल्भियाले प्रदान गर्ने आधार भरणसम्बन्धी, म काटिएको र क्यान्ड मशरूम पनि थप गर्दछु। यो राम्रो देखिन्छ। आह !! इलेना र सिल्भियालाई बधाई छ, मँ मेरो ब्लडमको रूपमा मेरो ब्लग गर्दछु।
क्रिस्टिना "Vademecum" को बारेमा कति हास्यास्पद छ, म तपाईंलाई हाम्रो ब्लग मन पराउन पाउँदा खुसी छु र भर्नको लागि तपाईंको सुझावको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यो प्रयास गर्नुपर्छ।
किन दुईवटा प्लास्टिकको बीचमा जन प्रसार गर्न आवश्यक छ? त्यो हो कि म जनता सँगसँगै हिँड्दिन
यो रोलरको साथ तन्काउन अधिक सहज छ र केहि पनि यसलाई टाँसिदैन। एक पटक तानिएपछि हामी शीर्ष प्लास्टिक हटाउँछौं र तल एउटा लिन्छौं यसलाई ओभन ट्रेमा राख्यौं, यसलाई फर्काएर।
मलाई श doubt्का छ, जब तपाईं आटा फैलाउने कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईंको मतलब दुवै थर्मामिक्समा बनेको पीठो र पहिले नै खरीद गरिएको एक हो (उदाहरणका लागि लिडल) वा पछिल्लो तान्न हुँदैन।
नमस्कार, किन्नुभएको पफ पेस्ट्री पेनलाई तान्नै पर्छ वा यो यस्तो लाग्छ कि यो कसरी भर्ना पर्छ? खैर, स्याप्पलको साथ छाला बिना डिस्लेटेड कोडको अर्को भर्ने, अभिवादन
LORELAY लाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो भरी !! धेरै धेरै धन्यवाद। खरिद गरिएको पीठो यो बाहिर नलगाइन्छ। जब हामी यसलाई अनरोल गर्छौं, यो ट्रेमा राखिन्छ र यो भरिन सकिन्छ।
नमस्ते सिल्भिया, मैले पढेका सबै व्यञ्जनहरू मैले तिनीहरूलाई एक-एक गरी बनाउनुपर्दछ, किनकी मैले टिएम खरीद गरें, म सबैले इम्पानडा दाबी गर्दछु, र यद्यपि यो स्वादको कुरा भए पनि सबैभन्दा धनी टुना हो, र म सँधै पीठो बनाउनुहोस्, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि लर्डर सुँगुरको मासु हो र यसलाई नुनको लागि प्रतिस्थापन गर्दछ, ओभनको पीठो बनाउँदा म यसलाई २º०º पुर्‍याउँछु, र पाई भित्र हुँदा म यसलाई १ lower० मा झार्छु, यी सबैको साथ। म सुझाव दिन्छु कि खुर्सानी भुटेको छ र टमाटर भुटेको छ, र जब म aubergines छ म एक सानो टुक्रा टुक्राको टुक्रामा पनि राख्छु, टुनाdको धेरै राख्छु म राम्रोसँग निकाल्न सक्छु, म तिनीहरूलाई यो जस्तै गर्दछु, तर त्यसो भए तपाईं सक्नुहुन्छ , नुन र मरिच, एक सानोdतुलसी…। tm चमत्कार हो र बाँकी काम गर्छु।
पनीर र बेकन मनपराउनेहरूका लागि सल्लाह, मिति पनि, र क्रीम वा पग्ले पनीरको स्प्लाश नबिर्सनुहोस्, यद्यपि यो विधिले आटा कडा बनाउँदछ, यसलाई तुलसीको साथ छर्कनुहोस्। शुभकामना
एम्पानेडाको यस सुपर सुझावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
प्याकी भल्भर्डे पेरेज भन्यो
नमस्कार, म तपाईको अनुयायी हुँ र मैले तपाईको ब्ल्ग पत्ता लगाए पछि मैले खाना पकाउन छोडेको छैन, पाई तपाईंलाई पनी पछि यसलाई स्थिर बनाउन सक्छु कि भनेर सोध्न चाहान्छु, र कार्यक्रमको अघि बढ्नु पर्ने दिनको खाना तयार पार्छु।
Paqui valverde perez लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यहाँ प्रयास गरेको छैन तर मलाई लाग्छ यो एक उत्तम विचार हुन सक्छ। यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने हामीलाई के भयो परिणाम।
मारिया दिल्ली मार्च भन्यो
नमस्कार, मैले एम्पानेडाको लागि पिठो बनाउन कोसिस गरें र थर्मोमिक्स रोकियो र मैले एर get get पाएँ, तर म निर्देशनहरू फेला पार्न सकेन र यसको अर्थ के हो मलाई थाहा छैन, मलाई लाग्दछ कि मिसिनले पिठो राम्रोसँग तौल सकेन र त्यहाँ मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छ, यदि तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि हेरौं
मारिया DEL MAR लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मारिया डेल मार्च, सत्य यो हो कि म तपाईंलाई भन्न सक्दिन कि तपाईंको मेसिनमा के हुन्छ। यदि समस्या यथावत् छ भने, तपाइँको प्रतिनिधिमण्डललाई कल गर्नुहोस् र उनीहरूलाई भन्नुहोस् ... यो केहि महिना अगाडि बिग्रियो र केहि दिनहरूमा मलाई भयो ...।
मैले योर्क ह्यामलाई चीजसँग राखें र एम्पानडा कभर गर्नु भन्दा पहिले यसलाई अलि बाक्लो बेहेमेलले छोपेको थियो।
योर्क ह्यामको सट्टामा तपाई सेरानो हाम राख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि निकै राम्रो आउँछ।
Fany लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, म फोरममा नयाँ छु। एक प्रश्न, आटा सधैं राम्रो बाहिर आउँछ? कहिलेकाँही यो मेरो लागि चिल्लो को रूपमा बाहिर आउँछ र मलाई यो फैलाउन गाह्रो हुन्छ। धन्यबाद
जैतुनलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते ओलिभा, फोरममा स्वागत छ! आटाको साथ तपाईंको समस्याको लागि, तपाईंले यसलाई कति समय आराम गर्न दिनुहुन्छ? धेरै पटक, यदि यो धेरै लोचदार छैन भने, यो आराम गर्ने समयको कमीको कारण हो। र "चिसो" को लागी यो सामान्य छ किनभने यो आटा अलि चिल्लो छ, तर यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि यो अत्यधिक छ भने, मक्खनको सानो मात्रा घटाउनुहोस्।
धेरै धेरै धन्यवाद। म लामो समय देखि फोरम हेर्न सक्षम छैन। मा तिमीलाई भन्छु।
म यसलाई मिति र गौडा चीजले बनाउँछु
यो दर्शनीय बाहिर आउँछ
ओ मानुएल, मेरो मुख पानी छ ... के राम्रो संयोजन !!
सबैलाई नमस्कार! मेरो पाईसँग मेरो प्रश्न छ। इम्पानाडा भोली दिउँसोको लागि हो जब म घरमा खाजा खाजा बनाउनेछु, मैले पहिले नै सास बनाई सकेको छु र म यसलाई आराम गरिरहेको छु। मेरो बिचार आज दिउँसो पिठो बनाउने र प्याटीले बनाएको छोड्ने हो, तर मलाई थाहा छैन म यसलाई कहाँ राख्नुपर्दछ भोलि सम्म, यसलाई फ्रिजमा राख्ने हो वा यसलाई भान्साकोठाको टेबुलमा वातावरणमा छोड्नुहोस्, तपाईं सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईं यसलाई कोठाको तापक्रममा छोड्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी अब हामी ग्रीष्म inतुमा छैनौं। यदि यो एक रात फ्रिज बाहिर छ भने, यो केहि पनि हुनेछैन र आटा भोली अझ धनी हुनेछ।
हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाइँसँग अलिकति भए पनि कसरी हुन्छ?
धेरै धेरै Ascen धन्यवाद! तपाईं सही हुनुहुन्थ्यो, यो एकदम राम्रो थियो। यो धेरै सफल भएको छ।
मलाई खुशी छ अन्ना, तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यवाद! यदि अर्को पटक हिम्मत भयो भने म तपाईंलाई अर्को एम्पानेडाको लिंक छोडछु http://www.thermorecetas.com/2012/05/14/empanada-tradicional/। हामी यसलाई प्राय घरमा नै बनाउँछौं र स्वादिलो ​​पनि छ। चुम्बनहरू!
एक पटक चर्को थर्मोमिक्सको साथ बनेपछि के तपाईं थप तरल पदार्थ निकाल्नुहुन्छ?
अन्ना, यदि योसँग धेरै तरल पदार्थ छ भने, यसलाई केही खाली गर्नुहोस्।
वैनेसा पेरेज भन्यो
नमस्ते, कसैले मलाई पाईबाट आकार आउन सक्छ कि धन्यवाद भन्न सक्छ
भेनेसा पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
कुकी पानाको आकारको बारेमा। यसलाई आधारको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, यसलाई पहिले ग्रेसेप्रुफ कागजले छोप्नुहोस्।
Ainssss…! हिजो मैले बेलुकाको खानाको लागि इम्पान्याडा भर्ने बनाएँ र यो स्वादिष्ट भयो !! ???? म Lidl मा आटा किनेको, म यो गर्न समय छैन! धन्यवाद!
महान पैट्री! म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु खुशी छु। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
नमस्कार !! मैले तयार-भुईँको आटा किनें, तर मैले यसलाई फ्रिजमा राख्न बिर्सिएँ र यो कोठाको तापक्रममा दुई घण्टासम्म रह्यो। के यो खराब हुन सक्छ? धन्यबाद
Belen लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले पहिलो पटक यो बनाएको हुनाले, करिब एक बर्ष पहिले, मेरो घरमा अरू कुनै विधि प्रयोग गरिएको छैन।
Cintia लाई जवाफ दिनुहोस्
दुई-रंग काटिएको रोटी
एप्पल र अखरोट रोटी